Antibiotic-Tilmicosin amin'ny biby - BALLYA
Posted on Janoary 21, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona ny tilmicosin?
Vokatry ny Tilmicosin
Hatramin'ny nanombohan'ny fararano, noho ny fahasamihafana lehibe eo anelanelan'ny andro sy ny alina, dia mitranga matetika ny aretin'ny taovam-pisefoana any amin'ny fiompiana kisoa. Tilmicosin no safidy voalohany amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny aretin'ny taovam-pisefoana, noho izany dia be mpampiasa amin'ny fiompiana kisoa. Fa inona no tena fantatrao momba ny tilmicosin?
Tilmicosin dia zava-mahadomelina lafo loatra. Izy io dia biby fiompy semi-synthesized sy antibiotika akoho amam-borona avy amin'ny hydrolyzate an'ny tylosina, ary fosidà tilmicosin dia ampiasaina amin'ny fanafody. Ampiasaina indrindra izy io mba hisorohana sy hitsaboana pnemonia biby an-trano (vokatry ny otrikaretina Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella, Mycoplasma, sns.), Mycoplasmosis avian ary mastitis amin'ny biby mampinono.
Tilmicosin dia karazana tylosin hydrolyzate izay mialoha ny semi-synthetic macrolide antibiotika ho an'ny biby. Ny orinasa Elanco Animal Health Products Company tamin'ny taona 1980 no novolavola voalohany, ary notanisaina tany amin'ny firenena vahiny sasany. Any Sina, ny Minisiteran'ny Fambolena any Sina dia nanaiky ny famokarana zava-mahadomelina sasany Tilmicosin akora, premixes, vahaolana ary tsindrona.
Ny tilmicosin dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny bakteria, toetra mampiavaka ny pharmacokinetika, ary koa afaka manatsara ny tsimatimanon'ireo biby. Ho fanampin'izany, ny fikarohana farany dia mampiseho fa ny Tilmicosin koa dia misy fiantraikany antivirus amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana aretina kisoa maromaro. Ankoatr'izay, tsy misy fanoherana mifanohitra amin'ny antibiotika mahazatra mahazatra amin'ny fitsaboana klinika ny biby isan-karazany.
Ampitahao amin'ny Tylosin, kely kokoa ny fatra azy, maharitra ny vokany, kely kokoa ny voka-dratsiny, ambany ny sisa tavela ao amin'ny vatana ary azo antoka sy tsy misy poizina izy io. Izy io dia fanafody anti-bakteria ara-toekarena, azo antoka ary mahomby vaovao mampiroborobo ny aretina amin'ny biby. Noho izany, Tilmicosin dia hanana anjara toerana lehibe kokoa amin'ny fifehezana ny aretin'ny biby amin'ny ho avy ary manana fahatsinjovana malalaka amin'ny fampiharana.
Ity vokatra ity dia tototry ny fitantanana am-bava sy ny tsindrona subcutaneaux haingana, saingy tsy feno. Ny habetsaky ny fizarana dia lehibe, ary ny fifantohana zava-mahadomelina ao amin'ny sela dia avo. Manana fidirana hozatra tsara izy io ary afaka miditra haingana sy tanteraka amin'ny tratra avy amin'ny ra. Ny fifantohana zava-mahadomelina amin'ny ronono dia avo, ny fotoana fikolokoloana dia lava, ary ny antsasaky ny ronono dia maharitra 1-2 andro.
Misy fiatraikany amin'ny bakteria miabo tsara, bakteria miiba ratsy, mycoplasma, spirochetes, sns.; manana fiasa mahery vaika mahery vaika noho ny tylosin manohitra ny Actinomyces pleuropneumoniae sy Pasteurella.
Tilmicosin dia semi-synthetic macrolide antibiotika. Izy io dia manana rafitra lactone peratra 16-membered. Ny vondrona hydroxyl eo amin'ny peratra sy ny siramamy na siramamy soloina dia mifamatotra amin'ny fatorana glycoside, ary kely ny fihenjanana makrocyclika. Ny Tilmicosin dia mazàna miteraka vokan'ny bakteria amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fatran'ny proteinina amin'ny bakteria. Ny fampifangaroana azo ahodina miaraka amina subunit 50S ribosomal dia manakana ny asan'ny translocases, miantraika amin'ny fizotry ny famindrana ny ribosome, ary manakana ny fanitarana ny rojo peptide sy ny synthetic synthetic. Izy io dia mpiorina bakteriaostatika. Tilmicosin dia iray amin'ireo antibiotika azo antoka indrindra amin'izao fotoana izao, ary anisan'ny antony tsy dia mampisy poizina azy ny tsy fifamatorana amin'ny ribosome 80S an'ny biby mampinono.
Tilmicosin dia misy fiantraikany amin'ny bakteria amin'ny fifandrindrana amin'ny macrophages. Amin'ny fanjakana ara-dalàna, ny macrophages izay misy ao amin'ny alveoli dia afaka mitelina ny bakteria sy mycoplasma izay nangonina teo amin'ilay toerana voan'ny otrikaretina, mampiasa ny anzima fandevonan-tenan'izy ireo mba hamonoana ireo otrikaretina voatelina, ary avy eo mamoaka ilay antsoina hoe hery fiarovana antigenika avy amin'ireo bakteria novonoina. Ary mampita vaovao amin'ny lymphocytes izy io ary mampiroborobo ny famokarana antibody.
Fa raha ny marina, ny sasany amin'ireo bakteria natelina ao anaty makropagka dia tsy azo novonoina, ary ny tilmicosin dia afaka miara-miasa amin'ny anzima fandevonan-kanina macrophage hamono ny pathogen. Ny fanadihadiana dia nanamafy koa fa ny porcine reproductive sy respiratory respiratory virus (PRRSV) ary ny porcine circovirus karazana I (PCV2) dia mety hiteraka fihenan'ny macrophage amin'ny kisoa, ary miaraka amin'izay dia mampihena ny hery fiarovan'ny hery fiarovan-tena. Ny tilmicosin dia afaka manampy ny macrophages hanamboatra ny hery fiarovany eo akaikin'ny mahazatra. Ny tilmicosin koa dia afaka manakana ny nekrosis avy amin'ny neutrofil, miaraka amin'ny vokatry ny fitaomana apoptosis, ary ny fisorohana ny fivontosana tsy hihamafy. Ho fanampin'izany, ny Tilmicosin dia mety koa miasa ho mpanelanelana amin'ny hery fiarovana mba hifehezana ny hery fiarovan'ny vatana, amin'izay hampiroborobo ny fiasan'ny vatana.
Lafin'ny antivirus: ny Tilmicosin dia misy fiatraikany amin'ny famerenana ny virus PRRS.
Lafiny mikraoba: Tilmicosin dia mora tohina amin'ny mycoplasma sy Haemophilus parasuis ary aretina hafa;
Ampiasaina indrindra amin'ny aretina mamindra amin'ny kisoa, akoho, omby, ombivavy be ronono, osy sy biby hafa, indrindra amin'ny fisorohana sy fitsaboana ireo biby fiompy sy fiompiana akoho amam-borona toy ny fiompiana actinobacillus pleuropneumonia, pasteurellosis ary mycoplasmosis akoho, sns matanjaka i Tilmicosin hetsika bakteria manohitra mycoplasma amin'ny akoho amam-borona ary efa be mpampiasa amin'ny fitsaboana mycoplasma amin'ny akoho amam-borona.
Ny Tilmicosin dia misy fiatraikany amin'ny bakteria miabo tsara, bakteria miiba gram-mycoplasma ary spirochetes. Ny Tilmicosin dia manana fihetsiketsehan'ny bakteria misimisy-mitovy amin'ny tylosina, fa ny asany miady amin'ny bakteria dia tsara lavitra noho ny tylosin.
Tilmicosin dia zava-mahadomelina macrolide, izay misy vokarin'ny bakteria sy anti-inflammatoire mazava ho azy. Afaka misoroka ny fivontosana izany. Aorian'ny fihenan'ny bakteria dia afaka manakana ny famerenan'ny otrikarenan'ny sofina manga ihany koa izy io, amin'izay mampihena ny fihanaky ny pnemonia mycoplasma, ny pleuropneumonia, ary ny pnemonia amin'ny kisoa akanin-jaza. Tilmicosin dia misy fiatraikany tsara amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana ary afaka mifehy ny fivoaran'ny PRRS.
Ny ankamaroan'ny Tilmicosin eny an-tsena dia vovoka, satria ho poizina kokoa amin'ny vatana ny tsindrona, ary ny fatra ara-pitsaboana dia manakaiky ny fatra mahafaty, ka azo antoka kokoa ny fampiasana ny fangaro miaraka amin'ny sakafo. Ny fatran'ny Tilmicosin nosoratan'ny minisiteran'ny Fambolena dia 200 ka hatramin'ny 400 mg / kg ny fifangaroana, ary ampiasaina mandritra ny 7 ka hatramin'ny 14 andro. Araka ny fepetra takiana, ny fangaro fampifangaroana dia 200 ～ 400g / t, ary ny atin'ny tsena tilmicosin prisam ankehitriny dia 20%, izany hoe ny fifangaroan'ny fitaovana fampifangaroana tilmicosin 20% dia 1 ～ 2kg / t, amin'ny fampiasana teknolojia fandrakofana Tilmicosin manana efficacy tsara kokoa amin'ny fatra iray ihany.
Aorian'ny fampiasana Tilmicosin hanafainganana ny famoahana ny vavony, dia mety haharitra ny fotoana hijanonan'ny zava-mahadomelina ao an-kibo. Satria manana tsiro mangidy mahery i Tilmicosin, hitombo ny faritra misy mucosa gastric raha mijanona maharitra ao an-kibo izy io, ka mampitombo ny fahasosoran'ny moka vavony ary mitera-doza amin'ny fery vavony. Alohan'ny hampiasana Tilmicosin dia ilaina ny mifehy ny sakafon'ny kisoa, ary avy eo afangaro ny fanafody amin'ny fanafody, mba ho mora voan'ny tsinay kely, amin'izay dia hanatsara ny fahombiazan'ny Tilmicosin ary hisorohana ny fahasimban'ny mucosa vavony.
Ny Tilmicosin amin'izao fotoana izao eny an-tsena dia mizara ho karazany roa: mifono sy tsy miakanjo. Ny Tilmicosin mora vidy dia mampiasa teknolojia tsy sarona. Tsotra ny fizotrany, saingy mangidy ny tsirony ary tsy mahazaka asidra, ka tsy afaka mihetsika tsara eo ambanin'ny asan'ny asidra vavony. Mba hamahana ity olana ity dia mpanamboatra mahazatra sasany no hampiasa teknolojia famonoana Tilmicosin, izay amoaka ao amin'ny tsinay ihany, izay afaka mamaha ny olana mangidy, ary mahatratra ny tsinay, ka tsara kokoa ny fitsaboana.
Hoy ny The Chinese Veterinary Farmacopoeia: Ny torolàlana momba ny tsindrona Tilmicosin dia mampiseho fotsiny ny fampiasana sy ny fatran'ny omby sy ondry. Satria ny fatra ara-pitsaboana Tilmicosin amin'ny kisoa dia tena akaiky ny fatra mahafaty, ny Farmacopoeia Veterinary dia tsy manondro ny fomba sy ny refy ny kisoa. Mandritra izany fotoana izany dia mety ny mampiasa ireo fitaovana fampifangaroana, noho izany dia mety amin'ny fampifangaroana akora amin'ny kisoa ny Tilmicosin.
Ny fatran'ny Tilmicosin nosoratan'ny Ministeran'ny Fambolena dia 200-400 mg / kg ny fangaro, ary ampiasaina mandritra ny 7-14 andro izy io. Araka ny fepetra takiana, ny fangaro fampifangaroana dia 200 ～ 400g / t, ary ny atin'ny tsena tilmicosin prisam ankehitriny dia 20%, izany hoe ny fifangaroan'ny fitaovana fampifangaroana tilmicosin 20% dia 1 ～ 2 kg / t.
Ity vokatra ity dia voarara tsy hitsindrona intravena. Ny tsindrona tokana 5 mg / kg ho an'ny omby dia mety hahafaty, ary mora mahafaty koa ho an'ny kisoa, soavaly ary primata. Ny taova kendrena misy poizina dia ny fo, izay mety hiteraka aretim-po ratsy.
Ny tsindrona intramuskular sy ny tsindrona subcutaneous dia mety hiteraka fihetsika eo an-toerana (edema, sns.), Ary tsy tokony hifandray amin'ny maso. Ny tranokala fampidiran-tsiranoka dia tokony hofidina amin'ny faritra eo amin'ny taolan-tehezana ao ambadiky ny soroka. Ny taova kendrena vokatry ny vokatra misy poizina amin'ity vokatra ity dia ny fo, izay mety hiteraka tachycardia sy hihamalemy ny fifanarahana. Ny tsindrona 50 mg / kg eo ambanin'ny hoditr'omby dia tsy mahafaty, raha 150 mg / kg kosa mahafaty. Ny tsindrona intramuscular an'ny l0mg / kg amin'ny kisoa dia niteraka fitomboan'ny fisefoana, fandoavana ary fikorontanana; 20 mg / kg dia mety miteraka fahafatesan'ny 3/4 amin'ireo kisoa andrana. Ny gidro dia tsy misy soritr'aretina fanapoizinana aorian'ny fampidirana intramuscular 10 mg / kg, 20 mg / kg dia mitarika fandoavana, ary 30 mg / kg kosa mahafaty.
2. Fanampiana mila fifantohana
A. Tandremo ny endrika fatra
Hoy ny pharmacopoeia: Ny torolàlana momba ny fampiasana tsindrona Tilmicosin dia mampiseho fotsiny ny fampiasana sy ny fatran'ny omby sy ondry. Koa satria ny doka fitsaboana Tilmicosin amin'ny kisoa dia tena akaiky ny doka mahafaty, ilaina ny mahafehy ny fatra ho an'ny kisoa. Ny tsindrona intramuskular amin'ny lanjan'ny vatana 10 mg / kg amin'ny kisoa dia mety mitombo ny fisefoana, ny fandoa ary ny fikorontanana; fampidirana intramuskular ny lanja 20 mg / kg mety miteraka fahafatesan'ny 3/4 amin'ireo kisoa fitsapana; noho izany, Tilmicosin dia mety amin'ny fampifangaroana ny kisoa.
B. Tandremo ny habetsahan'ny fatra
Ny fatran'ny tilmicosin dia 200-400mg / kg amin'ny fangaro. Amin'izao fotoana izao, ny atin'ny premix an'ny tilmicosin eny an-tsena dia 20% amin'ny ankapobeny, izany hoe ny fifangaroan'ny tilmicosin 20% dia 1 ~ 2kg / t. Ny ankamaroan'ny fanomanana tilmicosin an'ny mpamokatra dia mampiasa phosfat, ary oviana fosfatà tilmicosin ampiasaina, ny dosis ary ny fotoana fampiasana dia tsy maintsy ampitomboina (Tilmicosin phosphate dia mitentina 82% fotsiny, izay 20% ny fosfat Tilmicosin, ny tilmicosin dia manodidina ny 18% izay sarotra ny mahatratra ny toerana misy aretina lalina ao amin'ny havokavoka), koa andramo ny mampiasa fiomanana tilmicosin maharitra.
C. Tandremo ny vokatry ny famafana ny vavony
Mangidy loatra ny tilmicosin. Raha miadana ny famoahana ny vavony dia hijanona maharitra ao an-kibo ny zava-mahadomelina, ary hitombo ny faritra misy ifandraisany amin'ny moka vavony, izay hampitombo ny fahasosoran'ny vavonin'ny vavony ary hiteraka fery amin'ny fery amin'ny vavony.
Noho izany, rehefa ampiasaina ny tilmicosin dia tokony hafaingana ny famoahana ny vavony mba hanafohezana ny fotoana ipetrahan'ny zava-mahadomelina ao amin'ny vavony. Rehefa ampiasaina ny tilmicosin dia tokony fehezina mandritra ny fotoana maharitra ny sakafon'ny kisoa, ary avy eo dia tokony afangaro amin'ny sakafo ilay fanafody. Amin'izao fotoana izao dia hijanona mandritra ny fotoana fohy ao an-kibo ihany ilay fanafody ary havoaka haingana ao amin'ny tsinay kely. Ny tilmicosin dia mora tratran'ny tsinay kely, izay tsy vitan'ny manatsara ny vokatry ny tilmicosin, fa misoroka ihany koa ny fahasimban'ny zava-mahadomelina amin'ny mucosa vavony.
Ny fomba fiasan'ny Tilmicosin dia ny fampifangaroana amin'ny sokajy 50 amin'ny ribosome 70-taonan'ny bakteria, ary tetracyclines dia ampiarahina amin'ny sombin-bakteria 30S, ka ny Tilmicosin dia mety mifanaraka amin'ny tetracyclines toy ny doxycycline.
Tilmicosin dia manana rafitra mitovy amin'izany chloramphenicols toy ny florfenicol. Na dia ny fomban'ny asany aza dia ny mamatotra ny zana-kazo 50 an'ny ribosome, ny florfenicol dia miditra ao amin'ny sela bakteria amin'ny alàlan'ny fanaparitahana azo heverina ho matavy mba hanakanana ny tsy fitovizan'ny proteinina bakteria. Tilmicosin dia manana fidirana hozatra matanjaka ary ny fifantohana zava-mahadomelina ao amin'ny tazo havokavoka no avo indrindra, kendrena ary hifehezana sy hanasitranana ny aretin'ny taovam-pisefoanan'ny biby. Noho izany, ny fampiasana mitambatra florfenicol ary ny tilmicosin dia afaka manatsara ny fahombiazany.
Tilmicosin dia antibiotika macrolide namboarina avy amin'ny hydrolyzate an'ny tylosina, fa ny fahombiazany sy ny fiarovana azy dia somary tsara kokoa noho ny tylosin. Tilmicosin dia zava-mahadomelina natokana ho an'ny biby miaraka amina fampiharana marobe, saingy mila fehezina hentitra ny fampiasana azy sy ny fatra azy.
BALLYA manome a ballya-tilmicosin-test hilaza aminao raha misy tilmicosin ny sisa tavela amin'ny hena, indrindra ny henan-kisoa.